Olee otú ị ga-esi amalite inweta àgwà backlink URLs na saịtị gị?
Ndị na-agụ isiokwu a nwere ike ime ihe kachasị mma iji mee ka mgbalị SEO gbalitere ma melite visibilia dị na SERP. I meela ọtụtụ ọrụ na saịtị gị iji nye aka nyochaa njirimara nchọgharị gị na saịtị, ma a ka nwere ihe ọ bụla. Ya mere, ọ bụ oge ịlele ihe ọzọ ị nwere ike ime na saịtị gị - parco giochi per cani caserta italy. Ị mgbe chere banyere backlink URLs na otú ha nwere ike isi mmetụta gị website rankings? Ịmepụta SEO enyi na enyi URL bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa nke a na-apụghị ịhapụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta okporo ụzọ gị gaa na saịtị gị. Isiokwu a ga - enyere gị aka ịmụta ụfọdụ usoro SEO dị mkpa maka ịmepụta azụmazụ backlink URLs nke ọma.
Ụzọ iji meziwanye redlink URLs
Cheta ihe omume ụmụ mmadụ
Iwu kachasị mkpa ị ga-agbaso kachasị gị saịtị bụ na ịkwesịrị ime ihe niile maka ebe nrụọrụ weebụ gị ga-enweta uru. Nchọgharị ọchụchọ na-enye ekele ma na-akwụghachi ụgwọ weebụsaịtị nke na-enye ndị ọrụ ahụmahụ zuru oke. N'oge a, ọ bụ ihe dị mkpa dị mkpa. Ọ bụ ya mere na ị gaghị echegbu onwe gị naanị banyere bọtịnụ Google ndị na-esere ibe weebụ gị, kamakwa gbasara nkọwa ndị ọrụ nke URL gị dịka ọ nwere ike imetụta njikarịcha njirimara gị search engine.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na URL gị anya ogologo oge na mgbagwoju anya, ndị ahịa gị nwere ike ịgaghị pịa njikọ gị. N'ihi ya, ọ ga-ebipụ ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-abata na saịtị gị ma kpochapụ mgbalị ịchọrọ ịchọta search engine.
Ya mere, mgbe ị na-eke URL URL azụ na saịtị gị, i kwesịrị iburu n'uche ihe ndị mmadụ:
Dịka nchịkwa, ndị ọrụ na-enyocha nsonaazụ ọchụchọ, gbalịa ịhapụ ngalaba dịka. net ma ọ bụ. biz dị ka ha na-ele ụdị ngalaba dị ka àgwà, ndị na-abụghị ndị a ma ama na spammy. Ndị ọrụ na-enwe ike ịpị weebụsaịtị ndị nwere ụfọdụ uru na ntụkwasị obi. Dịka ọmụmaatụ,. A na-ewere mpaghara ngalaba ndị ọzọ ka ha bụrụ ndị a ma ama na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ bụ ya mere ị ga - eji chọta nke a mgbe ị na - ahọrọ ngalaba kwesịrị ekwesị na saịtị gị.
ndị nwere mmasị na-agụ ihe na URL
Ọ bụrụ na ndị ahịa gị nwere ike ghara ịghọta ebe nrụọrụ weebụ gị nke ọma, mgbe ahụ i nwere ohere ole iji nweta okporo ụzọ ezubere iche gaa na saịtị gị ma gbanwee ya n'ime ahịa. Onye ọ bụla ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ nke a na-apụghị ịgụ.
Jiri okwu ọchụchọ
Usoro ọchụchọ na-adabere na isi nke nchịkọta njikarịcha ọchụchọ gị ma mepụta ohere ịntanetị gị online.Ọ bụ echiche dị oke mma iji tinye ha n'ime URL gị dị ka ọ bụ ohere magburu onwe ya ịme ahịa gị n'ịntanetị. Site na itinye elu gị dị elu maka ihe ọchụchọ na URL gị, ị na-ahapụ ndị na-echere gị na-ege ntị kpọmkwem ihe ha ga-eche ihu na-esote saịtị gị. Mgbe ị na-edebe ebe nrụọrụ weebụ iji nye azịza kwesịrị ekwesị nye ajụjụ onye ọrụ, Google na-elele okwu dị na URLs. Otu URL kachasị elu na-enye echiche na maka bọọlụ ọchụchọ ma ọ dị ha mkpa ịwapụta saịtị gị maọbụ ọ bụghị dịka site na URL ha nwere ike nweta nhụchalụ nke ọdịnaya gị. Jide n'aka na ị naghị eji okwu ugboro ugboro n'ime URL gị n'ihi na ọ gaghị enwe mmetụta dị otú a dị ka okwu ọchụchọ dị ogologo, dị mkpa.